DataNumen: Inqubomgomo yobumfihlo
(A) Le Nqubomgomo
Le Nqubomgomo ikhishwa yizinhlangano ezibalulwe esigabeni M ngezansi (zihlangene, “DataNumen"," Thina "," thina "noma" wethu "). Le Nqubomgomo ibhekiswe kubantu abangaphandle kwenhlangano yethu esisebenzisana nabo, kufaka phakathi izivakashi kumawebhusayithi ethu (“amawebhusayithi” ethu), amakhasimende, nabanye abasebenzisi Bezinsizakalo zethu (ndawonye, ​​“wena”). Amagama achaziwe asetshenziswe kule Nqubomgomo achazwe eSigabeni (N) ngezansi.
Ngenhloso yale Pholisi, DataNumen isilawuli sedatha yakho yomuntu siqu. Imininingwane yokuxhumana inikezwe kusigaba (M) ngezansi se-applicable DataNumen Ibhizinisi lingaphendula imibuzo ngokusetshenziswa nokucutshungulwa Kwemininingwane Yakho.
Le Nqubomgomo ingahle ichitshiyelwe noma ibuyekezwe ngezikhathi ezithile ukuze ibonise ushintsho emisebenzini yethu maqondana nokuCutshungulwa Kwemininingwane Yabantu, noma ushintsho ku-applicabumthetho. Sikukhuthaza ukuthi ufunde le Nqubomgomo ngokucophelela, futhi ulibheke njalo leli khasi ukuze ubuyekeze noma yiziphi izinguquko esingazenza ngokuya ngemigomo yale Nqubomgomo.
DataNumen isebenza ngaphansi komkhiqizo olandelayo: DataNumen.
(B) Ukucubungula imininingwane yakho
Ukuqoqwa Kwemininingwane yomuntu: Singaqoqa imininingwane ephathelene nawe:
Uma usithinta nge-imeyili, ngocingo noma nganoma iyiphi enye indlela.
Esikhathini esijwayelekile sobudlelwano bethu nawe (isb. Imininingwane yomuntu esiyithola ngesikhathi sokwenza izinkokhelo zakho).
Lapho sihlinzeka ngemisebenzi.
Lapho sithola imininingwane yakho kusuka kubantu besithathu abasinikeza yona, njengama-ejensi wokukhomba ngesikweletu noma ama-ejensi okuphoqelela umthetho.
Uma uvakashela noma yimaphi amawebhusayithi ethu noma usebenzisa noma yiziphi izici noma izinsiza ezitholakala kumawebhusayithi ethu noma. Uma uvakashela iwebhusayithi, idivayisi yakho kanye nesiphequluli sakho singadalula ngokuzenzakalela imininingwane ethile (efana nohlobo lwedivayisi, isistimu yokusebenza, uhlobo lwesiphequluli, amasethingi esiphequluli, ikheli le-IP, izilungiselelo zolimi, izinsuku nezikhathi zokuxhuma kwiWebhu kanye neminye imininingwane yezokuxhumana) , ezinye zazo ezingaba yiDatha yomuntu siqu.
Uma ufaka i-resume / i-CV yakho kithina ukuze uthole isicelo somsebenzi.
Ukudalwa Kwemininingwane Yomuntu: Ekuhlinzekeni Izinsizakalo zethu, singakha futhi iDatha yomuntu siqu ngawe, njengamarekhodi wokusebenzisana kwakho nathi nemininingwane yomlando we-oda lakho.
Idatha yomuntu siqu efanelekile: Izigaba Zedatha yomuntu siqu mayelana nawe esingase sizicubungule zifaka:
Imininingwane ekhombisa wena: amagama (amagama); ubulili; usuku lokuzalwa / yobudala; ubuzwe; nesithombe.
Imininingwane Yokuxhumana: ikheli lokuthumela (isb., lokubuyisa imidiya yoqobo kanye / noma amadivayisi wokugcina); kostikheli; inombolo yocingo; ikheli le-imeyili; nemininingwane yephrofayela yezokuxhumana.
Imininingwane yokukhokha: Ikheli Lokubhila; inombolo ye-akhawunti yasebhange noma inombolo yekhadi lesikweletu; umnikazi wekhadi noma igama lomnikazi we-akhawunti; ikhadi noma imininingwane yokuphepha ye-akhawunti; ikhadi 'elivumelekile kusukela osukwini'; nosuku lokuphelelwa yisikhathi kwekhadi.
Ukubukwa nemibono: noma yimiphi imibono nemibono okhetha ukuyithumela kithi, noma obala post ngathi ezinkundleni zokuxhumana.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi imininingwane ephathelene nawe esiyicubungulayo ingafaka imininingwane ebucayi yomuntu siqu njengoba kuchaziwe ngezansi.
Isisekelo esisemthethweni sokuCubungula imininingwane yomuntu: Ekuqhubekeni Kwemininingwane Yakho Siqu ngokuhambisana nezinjongo ezibekwe kule Nqubomgomo, singathembela kokukodwa noma ngaphezulu kwezisekelo ezilandelayo zomthetho, ngokuya ngezimo:
sithole imvume yakho ocacile ngayo ngaphambili ku-Processing (lesi sisekelo somthetho sisetshenziswa kuphela maqondana nokuCubungula okugcwele ngokupheleletary - ayisetshenziselwa ukucubungula okudingekayo noma okuyisibopho nganoma iyiphi indlela);
Ukucubungula kuyadingeka maqondana nanoma iyiphi inkontileka ongangena nathi;
Ukucubungula kudingwa yi-applicabumthetho;
Ukucubungula kuyadingeka ukuvikela izintshisekelo ezibalulekile zanoma ngubani; noma
sinentshisekelo esemthethweni yokwenza ukucubungula ngenhloso yokuphatha, ukuqhuba noma ukuthuthukisa ibhizinisi lethu, futhi leyo nzalo esemthethweni ayibhalwa yizintshisekelo zakho, amalungelo ayisisekelo, noma inkululeko.
Icubungula imininingwane yakho ebucayi yomuntu siqu: Asifuni ukuqoqa noma ngenye indlela sicubungule imininingwane yakho ebucayi, ngaphandle kwalapho:
Ukucubungula kuyadingeka noma kuvunyelwe i-applicabumthetho (isb., ukuhambisana nezibopho zethu zokubika ngokwehlukahlukana);
Ukucubungula kuyadingeka ukuze kutholakale noma kuvinjelwe ubugebengu (kufaka phakathi ukuvimbela ukukhwabanisa, ukukhwabanisa kwemali nokuxhasa ubuphekula);
Ukucubungula kuyadingeka ekusungulweni, ekusebenziseni noma ekuvikeleni amalungelo asemthethweni; noma
esinakho, ngokuya nge-applicabumthetho, uthole imvume yakho ecacile ngaphambili ngaphambi kokuCubungula imininingwane yakho ebucayi (njengoba ngenhla, lesi sisekelo somthetho sisetshenziswa kuphela maqondana nokuCubungula okugcwele ngokupheleletary - ayisetshenziselwa ukucubungula okudingekayo noma okuyisibopho nganoma iyiphi indlela).
Uma usinikeza imininingwane ebucayi ebhekiswe kithi (isb., Uma usinikeza ngehadiwe lapho ufisa ukuthi siphinde sithole khona idatha) kufanele uqinisekise ukuthi kuvumelekile kuwe ukudalula leyo mininingwane kithi, kufaka phakathi ukuqinisekisa ukuthi enye yezisekelo ezisemthethweni okubekwe ngaphezulu kuyatholakala kithi maqondana nokuCubungula kwaleyo Datha Ebucayi Yomuntu.
Izinhloso esingacubungula ngazo idatha yakho yomuntu siqu: Izinhloso esingacubungula ngazo idatha yomuntu siqu, ngokuya nge-applicabumthetho, kufaka:
Amawebhusayithi ethu: ukusebenza nokuphatha amawebhusayithi ethu; ukuhlinzeka ngokuqukethwe kuwe; ukubonisa ukukhangisa nolunye ulwazi kuwe lapho uvakashela amawebhusayithi ethu; nokuxhumana nokuxhumana nawe ngamawebhusayithi ethu.
Ukuhlinzekwa Kwemisebenzi: ukuhlinzeka ngamawebhusayithi ethu kanye neminye imisebenzi; ukuhlinzeka ngemisebenzi ngokuphendula kuma-oda; kanye nezokuxhumana maqondana nalezo Zinsizakalo.
Ukuxhumana: ukuxhumana nawe nganoma iyiphi indlela (kufaka phakathi i-imeyili, ucingo, imiyalezo, izinkundla zokuxhumana, ipheost noma mathupha) kuncike ekuqinisekiseni ukuthi lokho kuxhumana uyakunikezwa ngokuhambisana ne-applicabumthetho.
Ukuxhumana nokusebenza kwe-IT: ukuphathwa kwezinhlelo zethu zokuxhumana; ukusebenza kokuphepha kwe-IT; kanye nokuhlolwa kwezokuphepha kwe-IT.
Ezempilo nokuphepha: ukuhlolwa kwezempilo nokuphepha nokugcinwa kwamarekhodi; kanye nokuhambisana nezibopho zomthetho ezihambisanayo.
Ukuphathwa Kwezezimali: ukuthengisa; ezezimali; ukuhlolwa kwamabhizinisi; nokuphathwa kwabathengisi.
Ucwaningo: ukuzibandakanya nawe ngenhloso yokuthola imibono yakho kuzinsizakalo zethu.
Ukwenza ngcono Izinsizakalo zethu: ukukhomba izingqinamba nezinsizakalo ezikhona; ukuhlela ukuthuthukiswa kwemisebenzi ekhona; nokwakha izinsizakalo ezintsha.
Umnyango Wabasebenzi: ukuphathwa kwezicelo zezikhundla nathi.
IVoluntary ukuhlinzekelwa Kwemininingwane yomuntu kanye nemiphumela yokunganikezwa: Ukuhlinzekwa kweMininingwane yakho yomuntu uqobo kuthinta kakhulutary futhi imvamisa kuzoba yisidingo esidingekayo ukuze singene esivumelwaneni nathi futhi sikwazi ukufeza izibopho zethu zesivumelwano kuwe. Awukho ngaphansi kwesibopho esisemthethweni sokuhlinzeka ngemininingwane yakho yomuntu siqu kithi; kodwa-ke, uma uthatha isinqumo sokungasinikeli imininingwane yakho epheqelezu, ngeke sikwazi ukuqeda ubudlelwane besivumelwano nawe futhi sifeze izibopho zethu zesivumelwano kuwe.
(C) Ukudalulwa Kwemininingwane yomuntu siqu kubantu besithathu
Singadalula imininingwane yakho yangasese kwezinye izinhlangano ezingaphakathi DataNumen, ukufeza izibopho zethu zesivumelwano maqondana nawe noma ngezinjongo zebhizinisi ezisemthethweni (kufaka phakathi ukuhlinzeka ngemisebenzi kuwe nokusebenzisa amawebhusayithi ethu), ngokuhambisana ne-applicabumthetho. Ngaphezu kwalokho, singadalula imininingwane yakho ku:
iziphathimandla zezomthetho nezokulawula, uma ziceliwe, noma ngenhloso yokubika noma yikuphi ukwephulwa koqobo kwe-applicabumthetho noma umthethonqubo;
ezimali, abacwaningi mabhuku, abameli kanye nabanye abeluleki abangochwepheshe bangaphandle ukuze DataNumen, kuncike ezibophweni ezibophezelekile zenkontileka noma zomthetho eziyimfihlo;
Amaprosesa wenkampani yangaphandle (njengabahlinzeki bezinsizakalo zokukhokha; izinkampani zokuthumela / zokuhambisa izincwadi; abahlinzeki bezobuchwepheshe, abahlinzeki benhlolovo yokwaneliseka kwamakhasimende, opharetha bezinsizakalo ze- "live-chat" nezinqubo ezihlinzeka ngezinsizakalo zokuthobela ezifana nokuhlola izinhlu ezikhishwe uhulumeni ezingavunyelwe, njenge-US Office Ukulawulwa Kwempahla Yangaphandle), etholakala noma kuphi emhlabeni, ngokuya ngezidingo ezibalulwe ngezansi kulesi Sigaba (C);
noma yiliphi iqembu elifanele, i-ejensi yokuphoqelela umthetho noma inkantolo, kuze kufike ezingeni elidingekayo ekusungulweni, ekusebenziseni noma ekuvikeleni amalungelo ezomthetho, noma kunoma yiliphi iqembu elifanele ngenhloso yokuvimbela, ukuphenya, ukuthola noma ukushushisa amacala obugebengu noma ukukhishwa kwezijeziso zobugebengu;
noma yimuphi umtholi (s) wabatholi besithathu ofanele, esimweni lapho sidayisa noma sidlulisa konke noma ingxenye efanele yebhizinisi lethu noma izimpahla (kufaka phakathi nokuhlelwa kabusha, ukuchithwa noma ukuqedwa), kodwa ngokuya ngohlelo lokusebenza kuphelacabumthetho; futhi
amawebhusayithi ethu angasebenzisa okuqukethwe komuntu wesithathu. Uma ukhetha ukuxhumana nokuqukethwe okunjalo, imininingwane yakho yomuntu uqobo ingabiwa nomhlinzeki ovela eceleni wenkundla yezokuxhumana efanelekile. Sincoma ukuthi ubuyekeze inqubomgomo yobumfihlo yalowo muntu wesithathu ngaphambi kokusebenzisana nokuqukethwe kwayo.
Uma sisebenzisana neProsesa lomuntu wesithathu ukucubungula imininingwane yakho, sizophetha isivumelwano sokusebenza kwedatha njengoba kudingwa yi-applicabImithetho neProsesa lolo lomuntu wesithathu ukuze iProsesa ibe ngaphansi kwezibopho ezibophezelayo zenkontileka: (i) ukucubungula kuphela imininingwane yomuntu ngokuya ngemiyalo yethu ebhaliwe ngaphambilini; futhi (ii) zisebenzise izindlela ukuvikela imfihlo nokuphepha kweDatha yomuntu siqu; kanye nezinye izidingo ezingeziwe ngaphansi kwe-applicabumthetho.
Singadalula imininingwane yomuntu mayelana nokusetshenziswa kwamawebhusayithi (isb., Ngokurekhoda leyo datha ngefomethi ehlanganisiwe) bese sabelana ngemininingwane engaziwa nabalingani bethu bebhizinisi (kufaka phakathi ozakwethu bebhizinisi langaphandle).
D) Ukudluliswa komhlaba wonke kwedatha yomuntu siqu
Ngenxa yebhizinisi lethu elikwamanye amazwe, kungadingeka ukuthi sidlulise imininingwane yakho yomuntu ngaphakathi kwe- DataNumen Iqembu, nakwabesithathu njengoba kuphawulwe esigabeni (C) ngenhla, ngokuhambisana nezinjongo ezibekwe kule Nqubomgomo. Ngalesi sizathu, singadlulisela iDatha yakho Yomuntu siqu kwamanye amazwe angaba namazinga aphansi okuvikelwa kwedatha kune-EU ngenxa yemithetho ehlukene kanye nezimfuneko zokuhambisana nokuvikelwa kwedatha kulezo ezisebenza ezweni otholakala kulo.
Lapho sidlulisela khona imininingwane yakho kwamanye amazwe, senza njalo, lapho kudingeka khona (futhi ngaphandle kokudluliselwa kusuka e-EEA noma eSwitzerland kuya e-US) ngokwesisekelo se-Standard Contractual Clauses. Ungacela ikhophi yezigaba zethu ezijwayelekile zenkontileka usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe kusigaba (M) ngezansi.
(E) Ukuphepha Kwemininingwane
Sisebenzise izindlela zokuphepha ezifanelekile zobuchwepheshe nezenhlangano ezenzelwe ukuvikela imininingwane yakho uqobo ekucekelweni phansi ngengozi noma ngokungemthetho, ukulahleka, ukuguqulwa, ukudalulwa okungagunyaziwe, ukufinyelela okungagunyaziwe, nezinye izindlela zokuCubungula ezingekho emthethweni noma ezingagunyaziwe, ngokuya nge-applicabumthetho.
Unesibopho sokuqinisekisa ukuthi noma iyiphi idatha yomuntu siqu oyithumela kithi ithunyelwa ngokuphepha.
(F) Ukunemba Kwedatha
Sithatha zonke izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ukuthi:
imininingwane yakho yomuntu siqu esiyicubungulayo inembile futhi, lapho kudingeka khona, igcinwa isesikhathini; futhi
noma iyiphi idatha yakho yomuntu siqu esiyicubungula enganembile (ngokubheka izinhloso ezenzelwe yona) iyasulwa noma ilungiswe ngaphandle kokulibala.
Ngezikhathi ezithile singakucela ukuthi uqinisekise ukunemba kwedatha yakho yomuntu siqu.
(G) Ukuncishiswa Kwemininingwane
Sithatha zonke izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yakho yomuntu siqu esiyicubungulayo ikhawulelwe kwiDatha yomuntu siqu edingeka ngokufanele mayelana nezinhloso ezibekwe kule Nqubomgomo (kufaka phakathi ukuhlinzekwa Kwemisebenzi kuwe).
(H) Ukugcinwa Kwemininingwane
Sithatha zonke izinyathelo ezizwakalayo ukuqinisekisa ukuthi iDatha yakho Yomuntu icutshungulwa kuphela isikhathi esincane esidingekayo ngezinjongo ezibekwe kule Nqubomgomo. Sizogcina amakhophi wemininingwane yakho uqobo ngendlela evumela ukuhlonza kuphela uma nje:
sigcina ubudlelwano obuqhubekayo nawe (isb. lapho usebenzisa khona amasevisi wethu, noma ufakwe ngokusemthethweni ohlwini lwethu lwamakheli futhi awuzikhiphanga ohlwini); noma
imininingwane yakho iyadingeka maqondana nezinjongo ezisemthethweni ezibekwe kule Nqubomgomo, esinezizathu ezisemthethweni ezisemthethweni (isb., lapho imininingwane yakho ifakiwe ku-oda elibekwe umqashi wakho, futhi sinentshisekelo efanele ekucutshungulweni leyo mininingwane ngenhloso yokusebenzisa ibhizinisi lethu nokufeza izibopho zethu ngaphansi kwaleyo nkontileka).
Ngokwengeziwe, sizogcina imininingwane yakho uqobo isikhathi:
noma iyiphi i-applicabisikhathi sokulinganiselwa ngaphansi kwe-applicabumthetho (okusho, noma yisiphi isikhathi lapho noma yimuphi umuntu angaletha isimangalo esisemthethweni ngokumelene nathi maqondana neDatha yakho Yomuntu, noma lapho imininingwane yakho ingasebenza); futhi
isikhathi esingeziwe sezinyanga ezimbili (2) ngemuva kokuphela kwalolo hlelo lokusebenzacabIsikhathi sokukhawulelwa (ukuze kuthi, uma umuntu eletha isimangalo ekupheleni kwesikhathi esikhawuliwe, sisanikezwa isikhathi esikahle sokukhomba noma iyiphi idatha yomuntu siqu efanele leso simangalo),
Uma kwenzeka kulethwa noma yiziphi izimangalo zomthetho ezifanele, singaqhubeka nokuCubungula imininingwane yakho yangasese ngalezo zikhathi ezengeziwe ezidingekayo maqondana naleso simangalo.
Phakathi nezikhathi eziphawulwe ngenhla maqondana nezimangalo zomthetho, sizokhawulela ukucubungula kwethu idatha yakho yomuntu siqu ekugcineni, nokugcina ukuphepha kwe-Personal Data, ngaphandle kwalapho imininingwane yomuntu idinga ukubuyekezwa maqondana nanoma isimangalo esisemthethweni, noma yisiphi isibopho ngaphansi kwe-applicabumthetho.
Uma izinkathi zingenhla, ngalinye lizosetshenziswacable, siphethe, sizosusa unomphela noma sibhubhise imininingwane efanelekile yomuntu siqu.
Ngokuya nge-applicabumthetho, ungaba namalungelo amaningi maqondana nokuSebenziswa Kwemininingwane Yakho Siqu, kufaka phakathi:
ilungelo lokucela ukufinyelela, noma amakhophi weDatha Yakho Siqu esiyicubungulayo noma esiyilawulayo, kanye nemininingwane ephathelene nohlobo, ukucubungula nokudalulwa kwaleyo Datha yomuntu siqu;
ilungelo lokucela ukulungiswa kwanoma yikuphi ukungalungi ku-Personal Data yakho esiyicubungula noma siyilawule;
ukususa imininingwane yakho yomuntu esiyicubungula noma siyilawule;
noma ukuvinjelwa kokuCubungula idatha yakho yomuntu siqu esiyicubungula noma siyilawule;
ilungelo lokuphikisa, ngezizathu ezisemthethweni, Ekucutshungulweni Kwemininingwane Yakho uqobo ngathi noma egameni lethu;
ilungelo lokuthi imininingwane yakho yomuntu esiyicubungulayo noma esiyilawulayo idluliselwe komunye uMlawuli, kuze kufike ezingeni lokusebenzacable;
ilungelo lokuhoxisa imvume yakho ku-Processing, lapho ukuba semthethweni kokucubungula kusekelwe kwimvume; futhi
ilungelo lokufaka izikhalazo kuGunyaziwe Wokuvikelwa Kwedatha maqondana Nokusetshenzwa Kwemininingwane Yakho Siqu noma ngathi.
Lokhu akuthinti amalungelo akho asemthethweni.
Ukuze usebenzise elilodwa noma amaningi ala malungelo, noma ukubuza umbuzo mayelana nala malungelo noma yikuphi okunye ukuhlinzekwa kwale Nqubomgomo, noma mayelana nokuSebenziswa Kwemininingwane Yakho Siqu, sicela usebenzise imininingwane yokuxhumana enikezwe kusigaba (M) ngezansi.
Uma sikunikeza ngezinsizakalo ezisuselwa kuma-oda, lokho kuhlinzekwa kwezinsizakalo kulawulwa yimigomo yenkontileka oyinikezwe wena. Uma kwenzeka kunokungafani phakathi kwaleyo migomo nale Nqubomgomo, le Nqubomgomo iyisisekelotary.
Ikhukhi yifayela elincane elifakwa kudivayisi yakho lapho uvakashela iwebhusayithi (kufaka phakathi amawebhusayithi ethu). Irekhoda imininingwane mayelana nedivayisi yakho, isiphequluli sakho futhi, kwezinye izimo, izintandokazi zakho nemikhuba yokuphequlula. Singacubungula idatha yakho yomuntu siqu ngobuchwepheshe bamakhukhi, ngokuya ngeyethu Cookie yemfihlo.
(K) Imigomo Yokusebenzisa
Konke ukusetshenziswa kwamawebhusayithi ethu kungaphansi kweyethu Imigomo Yokusebenzisa.
(L) Ukumaketha okuqondile
Ngokuya nge-applicabumthetho, lapho unikeze khona imvume ecacile ngokuya nge-applicabumthetho noma lapho sikuthumela khona ukuxhumana nokukhangisa nokumaketha okuphathelene nemikhiqizo namasevisi wethu afanayo, singacubungula idatha yakho yomuntu siqu ukuxhumana nawe nge-imeyili, ngocingo, ngeposi eliqondile noma ngezinye izindlela zokuxhumana ukukunikeza imininingwane noma izinsizakalo ezingaba onentshisekelo kuyo. Uma sikunikeza izinsizakalo, singakuthumela imininingwane mayelana nezinsizakalo zethu, ukukhushulwa okuzayo nolunye ulwazi ongaluthakasela, sisebenzisa imininingwane osinike yona futhi njalo ngokuhambisana nohlelocabumthetho.
Ungazikhipha ohlwini lwethu lwama-imeyili wokuphromotha noma izincwadi zezindaba nganoma yisiphi isikhathi ngokumane uchofoze isixhumanisi sokuzikhipha ohlwini esifakwe kuyo yonke i-imeyili noma incwadi yezindaba esiyithumelayo. Ngemuva kokuzikhipha ohlwini, ngeke sikuthumele amanye ama-imeyili, kepha singaqhubeka nokuxhumana nawe kuze kube sezingeni elidingekayo ngezinhloso zanoma yimaphi amasevisi owacelile.
(M) Imininingwane yokuxhumana
Uma uneminye imibono, imibuzo noma ukukhathazeka nganoma yiluphi ulwazi olukule Nqubomgomo, noma ezinye izindaba eziphathelene Nokucutshungulwa Kwemininingwane yomuntu uqobo DataNumen, Ngiyacela Xhumana nathi.
'Isilawuli' kusho ibhizinisi elinquma ukuthi Idatha yomuntu siqu icutshungulwa kanjani nokuthi kungani. Ezindaweni eziningi, uMlawuli unesibopho esiyinhloko sokuhambisana ne-applicabimithetho yokuvikela imininingwane.
'Igunya Lokuvikelwa Kwemininingwane' kusho isiphathimandla sikahulumeni esizimele esinikezwe ngokomthetho ukwengamela ukuhambisana ne-applicabimithetho yokuvikela imininingwane.
'EEA' kusho i-European Area Area.
'Idatha yomuntu siqu' kusho imininingwane emayelana nanoma yimuphi umuntu, noma lapho umuntu akhonjwa khona. Izibonelo Zedatha Yomuntu esingahle sizicubungule zinikezwe kusigaba (B) ngenhla.
'Inqubo', 'Iyacubungula' noma 'Kusetshenzisiwe' kusho noma yini eyenziwayo nganoma iyiphi i-Personal Data, noma ngabe iyindlela ezenzakalelayo, efana nokuqoqwa, ukuqoshwa, ukuhlelwa, ukugcinwa, ukuguqulwa noma ukuguqulwa, ukubuyisa, ukubonisana, ukusebenzisa, ukudalula ngokudlulisa, ukusabalalisa noma ukwenza okunye kutholakale, ukuqondanisa noma inhlanganisela, umkhawulo, ukusula noma ukubhujiswa.
'Umsunguli' kusho noma yimuphi umuntu noma ibhizinisi elicubungula idatha yomuntu siqu egameni loMlawuli (ngaphandle kwabasebenzi boMlawuli).
'Imisebenzi' kusho noma yiziphi izinsizakalo ezihlinzekwa ngu DataNumen.
'Imininingwane Ebucayi Yomuntu' kusho imininingwane yomuntu mayelana nohlanga noma ubuhlanga, imibono yezombusazwe, izinkolelo zenkolo noma zefilosofi, ubulungu bezinyunyana, impilo yomzimba noma yengqondo, impilo yezocansi, noma yimaphi amacala obugebengu noma izinhlawulo, inombolo kamazisi kazwelonke, noma olunye ulwazi olungathathwa ngokuthi uzwele ngaphansi kwe- applicabumthetho.